Maitiro ekuziva ndiani asina kunditevera pa Instagram | IPhone nhau
Masocial network ave a inofanira kuva kune akawanda mamirioni evashandisi. Imwe neimwe ine chikuva chavanofarira kuburikidza nacho chavanogovana zviitiko zvavo, zvinoitika, zviitiko zvakakosha ... kashoma ndiye munhu anoramba achigadziriswa, Kunze kwekunge iri kuburikidza ne bots, zvese Facebook ne Twitter kana Instagram mazuva ese.
Sezvo Instagram yakaisa macopy uye unama michina uye ichavandudza mashandiro nekuteedzera zvakazara kuSpapchat, Facebook chikuva kana network yemifananidzo yave imwe yeaya anoshandiswa kutenderera pasirese. Kana iwe uchida kuziva mushandisi mafambiro eakaunzi yako, saka tinokuratidza kuziva sei akamira kutitevera pa Instagram.
1 Kukosha kwevateveri
2 Zvishandiso zvekufunga
3 Mapepa ekuziva kuti ndiani akamira kunditevera pa Instagram
3.3 Vateveri & Sevateveri
3.4 Mishumo + ye Instagram
Kune vanhu vazhinji, nhamba yevateveri Icho chiratidzo chechinzvimbo, chepamusoro kana kuti ngatichichidane kuti simba, zvinoenderana nekuti unozvitarisa sei. Huwandu hwevanhu vanotitevera, zvinoenderana nekushandisa kwatingaite maakaundi aya (pachedu kana nyanzvi) indekisi yekutarisa kana tichida kuziva kana tiri kuita zvinhu nemazvo kana kana, nekusiyana, isu tine kugadzirisa zvirimo zvatinoburitsa.
Kusiyana nezvinowanzoitika mubhizinesi, kupi zviri nyore kurasikirwa nemutengi pane kuzviwanaMumasocial network zvakapesana, nekuti vazhinji ndivo vashandisi vanoramba vachitevera, pasina zvinoonekwa zvinokurudzira. Kana vasingachafarire zvirimo zvatinovapa uye zvinoenderana nekugara tichazviburitsa, zvinogona kuti muteveri wedu asvetuke pamusoro pezvedu, tweet kana pikicha. Kana zvirimo zvatinoburitsa zvakakwirira kwazvo uye zvisingafarire, zvinowanzoitika kuti vanozopedzisira vasisateedzere isu.
Nekudaro kurasikirwa kwevateveri chinhu chekutarisa kana izvi zvikaitika, kunyanya kana kurasikirwa kwacho kuchiitwa nguva nenguva. Kuve Instagram iyo nyowani fashoni pasocial network, uye kupi vashandisi vazhinji vari kutarisa kwavo kufariraMuchikamu chino tichaenda kunokurudzira akanakisa kunyorera uye webhu masevhisi kutarisa nguva dzese ndiani asingatevere uye ndiani amira kutitevera.
Usati watanga kushandisa rudzi urwu rwekushandisa uye / kana masevhisi, isu tinofanirwa kuziva kuti isu tinofanirwa bvumira kupinda kuaccount yedu, kuwana kwakazara kuaccount yedu, kuitira kuti iwe ugone kuongorora nguva dzese kwete vateveri chete vanouya nekuenda, asi zvakare upe mazano nezvekuti ungagadzirise sei zvirimo zvatinoburitsa, kuti zvive zvakanyanyisa uye zvinokwezva kune vateveri venguva yemberi. .
Zvese zvinoshandiswa uye / kana masevhisi atinokupa iwe muchinyorwa chino vakasununguka zvachose kuti udhaunirodhe, asi kazhinji, tinofanirwa kuisa mari, kuburikidza ne-in-app kutenga kana nekushandisa kunyorera kwemwedzi, kuti tikwanise kutora mukana kune ese mashandiro aanotipa. Kana iyo nguva ikasvika kana isu tikamira kushandisa izvi zvinoshandiswa, isu tinofanirwa kuyeuka kuti isu tinofanirwa kudzosera iko kuwana kwatakapa kudhata redu, nekuti neimwe nzira iwe unozokwanisa kuenderera uchiwana pasina chikonzero chakaringana. Kuvandudza kuwana kwedu Instagram account, isu tinofanirwa kuenda kumasarudzo ekumisikidza kuburikidza newebhu sevhisi uye kuidzima.
Mapepa ekuziva kuti ndiani akamira kunditevera pa Instagram
Crfirefire ndeimwe yeakanakisa maficha atinogona kuwana muApp Store yekushandisa uye kugadzirisa yedu Instagram account, asi kwete chete, nekuti zvinotibvumidza isu kuti tiwonekwe paFacebook, Instagam, YouTube uye mamwe mapuratifomu. Crowfire iri mukutarisira kwekuenderera mberi nekuongorora mafambiro emaakaundi edu, ichitiratidza mishumo yakadzama nezve ivo neyavokuratidza mafambiro atingaite kune ese ari maviri kuvandudza kuoneka kwedu sekubatana kwedu nevateveri vedu.
Moto wevanhu vazhinji unotibatsira kutsvaga nekubatana nevateereri chaivo vanokodzera chimiro chedu. Izvo zvakare zvinotibvumidza isu kuronga ese mavhiki ezvinyorwa pane ese masocial network matinenge tiine kuvepo. Ichi chishandiso hachingotipe chete mu-app kutenga kuti tikwanise kushandisa ese mashandiro atinopihwa nechikumbiro, asi zvakare zvinotibvumidza kushandisa kunyorera kuitira kuti tikanganwe kushandisa mari mukushandisa zvisina kurongeka. Kana iwe uchida kuwana zvakanakisa kubva pasocial network, Crowdfire ndiyo application yauri kutsvaga.
Kunyangwe paine chokwadi chekuti inotiratidza nechimwe chinyakare chinongedzo, InstaFollow inotibvumidza isu kuziva nguva dzese kuti chii chiri kufamba kwevateveri vedu, tichiziva nguva dzese ndiani vateveri vatsva, vashandisi vakamira kutitevera, tevera vashandisi isu tinotevera asi ivo havateveri isu uye vanokurumidza kutevera kana kusateedzera chero mushandisi wepuratifomu. InstaFollow UnFollow ye Instagram ndeye yemahara kunyorera iyo inotipa isu mukati-app kutenga kuti utore mukana kune ese aripo mabasa pasina kunyoreswa chero mhando.
Vateveri & Sevateveri
Vateveri & Sevateveri vanoita nhamba uye kuongorora kwedu Instagram account, nekukasira kuteedzera vanhu vanotitevera nekutarisa mashandiro avanoita nemabhuku edu. Nekuda kwechikumbiro ichi tinokwanisa kunzwisisa uye kuongorora vateereri vedu, vachitipa akasiyana mazano ekuvandudza nharaunda yedu. Vateveri & Sevateveri ndeye yemahara kunyorera iyo inotipa isu mukati-app kutenga kuti utore mukana kune ese aripo mabasa pamwe nerekunyorera system.
Mishumo + ye Instagram
Ichi chishandiso ndicho chinotipa rumwe ruzivo nezve mafambiro eakaundi account yedu uye neyatingaite ita ongororo yeakaundi yedu, tevera kukura kana kurasikirwa kwevateveri, kurumidza kuwana vashandisi vasina kutitevera, bata vateveri vedu, tarisa kuti ndivanaani vanhu vatinotevera asi vasingatitevere ... Mishumo + inotipa sevhisi yekunyorera kuti tikwanise kushandisa mamwe mabasa anopiwa neichi chishandiso chakazara. Mishumo + ye Instagram ndeye yemahara kunyorera iyo inotipa isu mukati me-app kutenga kuti utore mukana kune ese aripo mabasa pamwe nerekunyorera system.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Maitiro ekuziva ndiani asina kunditevera pa Instagram